बोलोग्नेस चटनी | ThermoRecines
CARNES28 मिनेट6 व्यक्ति
केहि दिन पहिले मैले वेब मा पोस्ट गरे पास्ता पकाउनुहोस् र तपाईं धेरै मलाई लागि नुस्खा राख्न मलाई सोधे बोलोग्नेस सस.
यो नुस्खा मेरो पतिको र अब मेरी छोरीहरु को मनपर्ने मध्ये एक हो, त्यसैले म यसलाई धेरै पटक बनाउँछु। यो भन्दा पहिले मैले यसलाई फरक बनाएँ, तर मेरो Thermomix® भएको र पुस्तक मा नुस्खा देखी, मँ यो तयार गर्न को लागी प्रोत्साहित गरिएको थियो र जब बाट उनीहरुले यो कोशिश गरे। तपाइँको मनपर्ने संस्करण।
यस नुस्खामा थप्नुहोस् सब्जिहरु गाजर, हरीयो काली मिर्च, मशरूम र विभिन्न मसाले जस्तै र यो राम्रो देखिन्छ। तपाइँ बीफ, पोर्क वा दुबै को मिश्रण को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी यो सास तयार गर्न प्रयोग गर्न सक्छौं अन्तहीन व्यंजनहरु कोमो लासग्ना, भरिएको तरकारी, cannelloni, पिज्जा वा पास्ता को लागी एक पक्ष को रूप मा।
1 मेरो व्यक्तिगत चाल
2 बोलोग्नेस सस
मेरो व्यक्तिगत चाल
मेरो व्यक्तिगत चाल को चम्मच को एक जोडी जोड्नु हो स्पेगेटी मसला। मँ एक प्रयोग गरीरहेको छु कि म धेरै बर्षहरु को लागी मर्काडोना मा किनेको छु र म यो स्पर्श यो नुस्खा को लागी माया गर्छु।
यो एक सानो सुझाव हो कि मेरी सासु ले मलाई दिनुभयो र म उसलाई धन्यवाद किनभने त्यो स्पर्श संग यो पास्ता जस्तै स्वाद छ। शुद्ध इटालियन शैली।
यो नुस्खाको साथ तपाईं स्वादिष्ट पास्ता पकवानहरू बनाउन सक्नुहुन्छ।
१ g० ग्राम गाजर
१ g० ग्राम प्याज
१ लौंग लसुन
१०० ग्राम च्याउ
G०० ग्राम टमाटर पेस्ट
G० ग्राम अतिरिक्त कुंवारी जैतुनको तेल
G०० ग्राम कीमाकार मासु
१ चुटकी मिर्च
२ चम्मच स्पगेटी मसाला
हामीले गिलासमा गाजर, लसुन, प्याज र हरियो मिर्च राख्यौं। हामी काट्छौं Seconds सेकेन्डको गति।।
गिलासमा मशरूम र टमाटर थप्नुहोस् र क्रश गर्नुहोस् १० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति 15-5।
तेल र फ्राई थप्नुहोस् Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
हामीले कीन्सेको मासु, नुन, तेज पात र बाँकी मसलाहरू राख्यौं। स्प्याटुला र प्रोग्राम प्रयोग गरेर तरकारीहरूसँग मासु राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् १० मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चाको गति।
यसलाई केही मिनेट को लागी शीशामा आराम गर्न दिनुहोस् र नुन पोइन्ट सुधार गर्नुहोस्। यदि यो धेरै तरल छ भने, हामी यसलाई केही मिनेट कप राखेर टोकरी राखेर टमाटर नछोड्नुहोस्।
थप जानकारी - पास्ता पकाउनुहोस् / लासग्ना / एगप्लान्ट्स पार्मीगियाना
मुहान - आवश्यक
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: चामल र पास्ता, CARNES, सजिलो, १/२ घण्टा भन्दा कम, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु, साल्सास
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » CARNES » बोलोग्नेस सस
के मर्काडोनासँग त्यो मसाला छ?
मैले यसलाई हेर्नुपर्नेछ किनकि यदि हामी यस चटनीलाई टीएमएक्समा थप डटको साथ पहिले नै मन पराउछौं भने, अझ राम्रो पनि छैन?
यसलाई बनाउने र यसलाई स्थिर गर्ने मेरो चलन छ र हतारमा त्यो दिन पास्ता, अवधि पकाउनु हो।
मसाला मसालाको भाँडोमा छ र यस चटनी को एक धेरै धनी पोइन्ट दिन्छ।
मलाई कि त मसुरीको बारेमा थाहा छैन, म अहिले खोज्दै छु! म, थर्मो जस्तै, किलो बनाउछु र बाहिर निकाल्न व्यक्तिगत गिलास जारमा स्थिर गर्दछ, विशेष गरी सानोको लागि। न त मैले लरेल राखें, म यसलाई तुरुन्तै प्रयास गर्छु! धन्यवाद सिल्विया!
म धेरै चोटि पनि गर्दछु र अन्य दिनहरूको लागि तयार गर्न स्थिर गर्दछु। मेरा बच्चाहरु लाई यो मन पर्छ।
नमस्ते!! मैले लेखेको यो पहिलो पटक हो ….m, मलाई यो पृष्ठ मनपर्छ….र मेरो tmx….. मेरो तेस्रो केटी हो, हाहाहा। ठिक छ, मसँग घरमा दुई राजकुमारीहरू छन्, र सबैभन्दा जेठी3वर्षकी छिन्, जब उनले यसको आवाज सुन्छिन् जब यो खोल्छ, उनी भन्छिन्: "बुबा: मलाई डर लाग्छ ..."। म उनको साथमा छोटो महिनाको लागि छु। म खुसी छु तर मैले अझै धेरै सिक्न बाँकी छ।
यस नुस्खाको बारेमा, म जान्न चाहन्छु कि च्याउ च्याउ क्यान्ड वा प्राकृतिक छ।
धन्यबाद र तपाईंको व्यंजनहरु संग अगाडि बढ्नुहोस्
म सामान्यतया क्यानमा मशरूमहरू राख्छु किनकि मसँग सधैं यसको एक हुन्छ तर तपाईं तिनीहरूलाई प्राकृतिक राख्न सक्नुहुन्छ र यो उत्कृष्ट बाहिर आउँछ।
मँ बाँकीसँग सहमत छु, हामीले त्यो मसिन हेक्टर खोज्नुपर्नेछ। विधि धेरै राम्रो छ।
म सिफारिस गर्दछु, किनकि यसले यसलाई धेरै धनी स्पर्श दिन्छ।
राम्रो धेरै राम्रो !! मैले सिलिभियाले भनेझैं यो मसालामा प्रयोग गरीरहेको छु र म यसलाई सबैलाई सिफारिस गर्छु, यो अति नै स्वादिष्ट छ!
धन्यवाद मरियम, म खुशी छु कि तपाईले एउटा ठूलो भान्सा बनाउँदै हुनुहुन्छ। चुम्बन
नमस्ते, मेरो नाम ईसा हो र म थर्मोमीसँग धेरै समयको लागि छु, पहिलो पृष्ठमा तपाईंलाई बधाई दिनुहोस् एकदम चाखलाग्दो छ, र तपाईं धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ, विशेष गरी म जस्तै नयाँ बच्चाहरूको लागि।
अब म तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, के तपाईं मलाई माछाको लागि हरियो सास बनाउनको नुस्खा पठाउन सक्नुहुन्छ? यो पुस्तकमा एक नुस्खा छ तर यो निकै तरल बाहिर आउँछ, म यो मोटा चाहन्छु।
ईसा, मैले यसलाई बनाउनको लागि प्रयास गरेको छैन यदि एक दिन मैले यो गरेँ भने यसलाई खुशीसाथ प्रकाशित गर्नेछु, यद्यपि अर्को याद राख्नुहोस् कि कर्नस्टार्चले गाढा बनाउन मद्दत गर्दछ र यदि तपाईंले पहिले नै राख्नुभयो भने, ग्रामको मात्रा बढ्छ।
म तपाईंलाई शानदार व्यंजनहरुका लागि धन्यवाद दिन चाहान्छु।
आना मारिया, धन्यबाद तपाईलाई दिनहुँ पछ्याउनु भएकोमा। मलाई खुशी छ कि तपाइँ हाम्रा व्यंजनहरू मन पराउनुहुन्छ।
नमस्ते, म जान्न चाहन्छु मँ कहाँ मसुन पाउन सक्छु, मैले यो कहिल्यै देखेको छैन, धन्यवाद
म यसलाई मर्काडोनामा किन्छु, जहाँ मसलाको जारहरू हुन्छ र यसलाई स्पेगेटी वा पास्ता मसाला भनिन्छ।
नमस्ते सिल्भिया, कति लामो हिसाब बिना सस फ्रिजमा रहन्छ?
एलेना, चार दिन भन्दा बढि सेवन नगरी सास पाउन यो सुविधाजनक छैन। मैले दुई दिनमा खर्च नगर्ने सबै चीजहरू मैले पहिलेनै स्थिर गरिसकेको छु।
तपाईको ब्लगमा केवल बधाई छ। यो धेरै रोचक, उपयोगी, सरल, पूर्ण, अपडेट गरिएको छ ... यसले थर्मोमिक्सको यस संसारमा शुरू गरेका हामी मध्ये धेरैलाई यसले धेरै नै मद्दत गर्दछ। यसलाई सजिलो बनाउनको लागि धन्यबाद।
नमस्ते, म जान्न चाहन्छु कि मसालेको "टेबलस्पून" ठूला हो, धन्यवाद।
तिनीहरू ठूला चम्मचहरू हुन्।
ब्लागमा बधाई छ, यो अद्भुत छ।
यो नुस्खा कसरी TM21 को लागि "परिवर्तन" हुनेछ?
यदि तपाईं आफ्नो रेसिपीहरूमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने सानो परिवर्तनहरू राख्नुभयो भने यो धेरै उपयोगी हुनेछ, हामी मध्ये जो अझै पनि हाम्रो पुरानो TM21 बाट मुक्त हुन चाहँदैन ... ।-)
कुबीलाई जवाफ दिनुहोस्
अन्तिम चरण बाहेक सबै कुरा उस्तै हुनेछ, मासु थप्नु अघि हामीले ब्लेडमा पुतली राख्यौं, मासु थियौं र बाँकी सामग्रीहरू र कार्यक्रम २० मिनेट, भेरोमा तापमान, गति १।
यो एक राम्रो विवरण हुनेछ यदि तपाईं रेसिपीहरूमा ती साना परिवर्तनहरू राख्नुहुन्छ जसको लागि हामी अझै पनि हाम्रो पुरानो TM21 छोड्ने प्रतिरोध गर्छौं !!!
स्वादिष्ट !!, यद्यपि अर्को पटक म अलि अलि प्याज राख्छु
मैले यस हप्तामा यो बनाएको हो र यो साँच्चिकै राम्रो भयो। सबै पाक कलाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद !!!!!!
मलाई तपाईं टमाटरले कसरी दुबला बनाउने विधि मलाई दिन चाहनुहुन्छ भने, म यसको कदर गर्छु, किनकि मेरी छोरीले यो मन पराई छ।
भिक्टोरिया, मैले तपाईंलाई यो नुस्खा भेट्टाए। मैले यो गरेको छैन तर हेरौं यसको लायक छ कि छैन। http://www.recetario.es/receta/2016/magro-con-tomate.html
मैले मौका पाएर तपाईंलाई भेट्टाएको छु कि मलाई चासो दिने एक नुस्खाको खोजी गर्दै। मलाई थाहा छैन यदि तपाईं अझै पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ भने, तर यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई बताउन चाहन्छु कि म थर्मोमिक्सको साथ डेढ बर्ष भएको छु र म खुसी छु। यो टीएमको साथ, हामी यसलाई मन परायो। म आशा गर्दछु कि म सबै संग सम्पर्कमा रहन सक्छु। ठूलो चुम्बन
नमस्ते रोजा! अवश्य पनि हामी यहाँ छौं र तपाईंलाई हामीसँगै पाउँदा खुशी छौं। तपाईको टिप्पणीको लागि धेरै धन्यबाद, यदि तपाईं पहिले नै १ वर्ष र आधा वर्षको लागि TMX सँग हुनुहुन्छ भने, तपाई एक विशेषज्ञ हुनुहुनेछ। हाम्रो वेबसाइट ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् किनकि हामीसँग धेरै व्यंजनहरू छन्, र ती सबै महान छन्! हामी तपाईंको लागि प्रतीक्षा गर्नेछौं!
नमस्कार, मैले आज तपाईंको ब्लग फेला पारे र मलाई यो मन पर्यो। म Thermomix, र नीबूनेड्स मा हिउँ बनाउन सिफारिस गर्न चाहान्छु। अभिवादन।
अलेजेन्ड्रा स्वागत छ!
तपाईको सिफारिश को लागी धेरै धन्यवाद! घरमा हामी ग्रीष्म lemonतुमा नींबू पानीको लतमा लागेका छौं र अब हामी नयाँ प्रस्तावहरूको खोजीमा छौं!
यदि तपाईंलाई हाम्रो ब्लग मनपर्‍यो भने म तपाईंलाई सदस्यता लिन सिफारिस गर्दछु। यो सित्तैमा हो र तपाई दैनिक दैनिक व्यंजनहरू सिधा ईमेलमा प्राप्त गर्नुहुन्छ!
"मसलाहरू" कृपया, त्यहाँ जनावरहरूको प्रजातिहरू छन्।
वास्तवमा, Iñigo, मैले हाम्रा सहकर्मी एलेनाको नुस्खा सच्याएको छु। धन्यबाद को लागी धेरै धन्यबाद! हाल दुई शब्दहरूको बिचमा अलमल छ र प्रयोगको साथ विकृत भयो। म, जो पत्रको हुँ, म तपाईलाई दुबै सर्तहरूको सहि उपयोगको महत्त्वमा पूर्ण रूपमा साझा गर्दछु। धन्यवाद! अंगालो।
टमाटर राखीएको नुस्खाको कुन ठाउँमा?
नमस्कार कुबी, तपाईंले यसलाई बिन्दु २ मा राख्नुपर्दछ
मक्खन स्याउ को गोला
स्टिक ब्रुन कुखुराको साथ